May 10, 2021 - Babal Khabar
May102021 by EditorNo Comments
सामान्यतयाः मानिसहरू कसैलाई पेच पर्नेगरी भन्नुपर्यो भने भन्छन् कि पैसा रूखहरूमा फल्दैन् ? तर यदि हामीले तपाईंलाई रूखहरूमा पैसा फल्छ भन्यौँ भने तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ ? वास्तुशास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरू बताइएको छ, जसले घरमा पैसा बढाउन सहयोग गर्छन । भिडियोको लागी तल थिच्नुस । हो, शास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरूलाई सम्पन्नता र समृद्धिसँग सम्बन्धित छन् भनिएको छ । आउनुहोस्, आज हामी तपाईंलाई ५ त्यस्ता रूख र बोटहरू बताउँदैछौं जसले तपाईंको घरमा पैसाको ओईरो लाग्नेछ । मनी प्लान्टका बोटहरू लामो समयदेखि सबैका लागि मनपर्दो बोटका रूपमा देखिएका छन् । यसको दाखको बोट पनि धेरै सुन्दर देखिन्छ । साथसाथै यसले वातावरणलाई शुद्ध पार्ने पनि काम गर्दछ । मनी प्लान्टलाई इग्निस कोणमा राख्न उपयुक्त ठानिन्छ ।भिडियोको लागी तल थिच्नुस । यस दिशामा राख्दा यो राम्रो फल्छ र फुल्छ पनि । घरमा मनी पलान्टका बिरूवाहरू
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ४ लाख नाघेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ९२७१ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या ४ लाख नाघेको हो । सोमबार सम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ४ लाख ३ हजार ७९४ जना पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या ३ लाख ६ हजार ७९४ पुगेको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ७ जना निको भएका छन् । यस्तै हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या ९३ हजार १४१ पुगेको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै १३९ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मृतकको संख्या यो हालसम्मकै धेरै हो । यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ हजार ८५९ पुगेको छ। पीसीआर विधिबाट आज १७ हजार ६२३ र एन्टिजेन विधिबाट ७८८ जनाको परीक्षण गर्दा जम्मा ९ हजार २७१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । साभार : pathivara news
ओलि पदमुक्त लगत्तै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ गर्न देउवा, दाहाल र यादवद्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी गरि राष्ट्रपतिलाई आग्रह
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्‍मा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि विपक्षी तीन दलका नेताले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेका हुन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । साभार : ekantipur
संसदले दिएन ओलिलाई विश्वासको मत, प्रधानमन्त्री ओली यसरी परे अल्पमतमा
२७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको छ भने विपक्षमा १२४ र १५ जना तटस्थ रहे । प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले १३६ मत पाउनुपर्ने थियो । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छन् । तर एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु बैठकमा अनुपस्थित नै भएनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मत दिएका छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरु भने तटस्थ बसेका छन् । साभार : onlinekhabar
दुईचार वटा झरेको आँप खुवाउनु हुन्छ मधेशीलाई ? : उपेन्द्र यादव
२७ वैशाख, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले मधेशीलाई फकाउन लागेको बताएका छन् । विगतका राजनीतिक घटनाक्रम सम्झदै यादवले ओली मधेश र मधेशी जनता विरोधी भएको आरोप लगाए । ‘अहिले अलिअलि मधेशीलाई फकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ’, यादवले आफ्नै पार्टी जसपाका महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोप्रति संकेत गर्दै भने । यादवले अगाडि भने, ‘यहाँ नै हो नि- समतल भूमि देख्नासाथ मधेश भन्‍नु हुन्छ । यूपी-विहारतिर मधेश छ ? भन्नुहुन्थ्यो । यूपी विहारै फेरि देखिरहनुभएको छ कि ?’ यादवले मधेश नेपालको अभिन्न अंग भएको र यूपी विहार नेपाल नभएको बताए । ‘मधेश नेपालको अभिन्न अंग हो । यूपी विहार नेपाल होइन’, उनले भने । मधेश आन्दोलनबारे पनि ओली अनुदार रहेको विगत यादवले सम्झिएका थिए, ‘अर्का कुरा मधेश आन्दोलन हुँदाखेरी सवभन्दा बढी तुलनात्मक रुपले मानिसहरु मारिएका छन् । गोली लाग
काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा अझै एक महिना लम्बिने यस्तो छ तयारी,के होला अब?
काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा अझै एक महिना लम्बिने भएको छ । काठमाडौँमा जारी गरिएको निषेधाज्ञा हाल दोस्रो हप्तामा छ । हाल जारी गरिएको निषेधाज्ञा वैशाख २९ गते मध्यरातबाट सकिदैछ। तर कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दो क्रम मै रहेकोले काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा अवधि अझै थप हुने भएको हो । सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले ७ दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २ साता निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैशाख २९ गते थप एक साताको लागि निषेधाज्ञा थप भएको आदेश आउने छ । एक एक हप्ता गरेर अझै एक महिना निषेधाज्ञा गर्ने सरकारको तयारी छ । तर परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार कुन कुन क्षेत्रमा कडाई गर्ने र कुन कुन क्षेत्र खुकुलो गर्ने भन्ने बारे सिडिओहरुले नै आदेश जारि गर्ने छन्। हाल पनि काठमाडौँबाट बाहिरी जिल्ला जानको लागि रात्रीकालिन बसहरु
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका कामहरु आफैं बोल्ने बताए ।
काठमाडौं, २७ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू छँदा छँदै अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने अहिले नै नचिताउन भनेका छन् । आज प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा बोल्दै उनले आफू नै प्रधानमन्त्रीमा रहने संकेत समेत गरे । ओलीले भने,‘म छँदा छँदै अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने नचिताउनु ।’ ओलीले सरकार जस्तो बनेपनि जे बनेपनि कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नुपर्ने बताए । उनले आफूले विश्वासको मत लिन्छु नभनेसम्म माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएको बताए । उनले भने,‘सरकारलाई कति सुदृढ समर्थन रहेछ । समर्थन फिर्ता लिनुभएन ।’ प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका कामहरु आफैं बोल्ने बताए । ‘राष्ट्रियताको पक्षमा त्यति सुदृढ र सक्षम ढंगले अगाडि बढेको सरकारलाई विश्वास गर्न नपर्ने कुनै कारण छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि बढाउन र नेपालीको इज्जत बढाउन
बहुमतको नयाँ सरकार गठनको सम्भावना टर्यो,ओलि नै पुन प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का
२७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोकिएसँगै बहुमतको नयाँ सरकार गठनको सम्भावना तत्काललाई टरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसदको अधिवेशन सोमबार बोलाइएको छ । विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभाका १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन् । तर माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । ६१ सांसद भएको नेपाली कांग्रेस र ४९ सांसदभएको माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन् । ३२ सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टीले सांसदहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्वादमा रहेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले तटस्थ बस्ने बताएका छन् भने डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले विश्वासको मत माग्ने प्रस
ओलीले राजीनामा दिएर आजै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने यस्तो छ तयारी
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सोमबार नै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली निकट एक उच्च नेताका अनुसार संभवतः ओलीले आज ११–१२ बजेतिर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनेछन् र साँझसम्म पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिनेछन्। प्रतिनिधि सभाबाट आज विश्वासको मत नपाउने र सरकार अल्पमतमा पर्ने स्पष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको सामना नगरी राजीनामा दिएर पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सहज बाटो रोज्ने योजना बनाएको ती नेताले बताए। यदि यही तयारी अनुसार भयो भने पाँच वर्षअघिको घटना दोहोरिने छ। २०७३ मा ओलीले अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनै लाग्दा त्यसको समना नगरी अन्तिम क्षणमा राजीनामा दिएका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री ओलिलाई भने यस्तो :लुम्बिनी घटना केन्द्रमा पनि दोहोरिन सक्छ
काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले लुम्बिनी घटना केन्द्रमा पनि दोहोरिन बताएका छन् । थापाले चुच्चे नक्शा जारी गर्नु र सिके राउतलाई मूल धारमा ल्याउने कामको उनले प्रशंसा गर्दै यस्तो आशंका गरेका हुन् । थापाले ट्वीटमार्फत भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाउनु हुनेछ । आजै राजीनामा आउला, फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहोला ।’ थापाले सोमबार हुने विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री फेल हुने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने त्यसका साथै पुन: उनै ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुन सक्ने उनले बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकालमा २ वटा काम राम्रो गरेको बताएका छन् । चुच्चे नक्शा जारी गर्नु र सिके राउतलाई मूल धारमा ल्याउने कामको उनले प्रशंसा गरेका गरेका छन् । ‘जेहोस् अनेक विवाद, असफलताका वावजुद लिम्पियाधुरा सहितको ‘चुच्चे’ नक्सा प्रकाशन र विखण्डनकारी सिके